Ogaden News Agency (ONA) – Mashruucii Birqod oo guuldarro ku soo afjarmay
Mashruucii Birqod oo guuldarro ku soo afjarmay
Posted by ONA Admin	/ August 14, 2012
Taliska dhiigya cabka ah ee garashada liita wuxuu qorsheeyey in shir aan waxba ka jirin oo loogu talagay dacaayad ku sheego inuu ka dhacay Birqod, hasa ahaatee CWXO ayaa arintaasi talaabadii ku habooneyd ka qaaday. Waxaa magaalada Birqod laga taagay teendhooyin la rabay in sawiro laga qaado isaga oo dad dhex fadhiyo. Waxaa Birqod yimid galabtii bisha Augost ahayd 13ka Cabdi iley iyo kooxdii sawir qaadayaasha Qorshuhu wuxuu ahaa in 14ka sawirada been abuurka ah la qaado.
Habeenkii 12 ka bishan ayaa mir culus ay kooxo CWXO oo si gaar ah u tababaran ku qaadeen weearar goobtii shirka. Waxay burburiyeen teendhooyinkii iyo meelihii nalka lagu xidhay. Cabdi Ileey iyo kooxdii la socotay waxaa habeenkaa loola cararay xerada ciidanka Woyaanaha. Waxaa mar labaad lagu weeraray Xerada ciidanka Woyaanaha ee Cabdi Ileey lagula cararay. Waxaa xusid mudan in booliskii uu watay iyo Hawaarintii laga uruuriyey maalin ka hor hubkii aamin darro awgeed taasoo muujinaysa mooraalka liita ee gumaysiga.
Markii ay mirtu dhacday, dadkii lagu soo ururiyey meesha waxay habeenkiiba u kala yaaceen si isma dayato ah. Waxay ka yaabeen in marka waagu beryo weerar lagu soo qaado. Badankood hal qof waagu uguma beryin Birqod. Cabdi Ileey iyo kooxdiisii ku dhuumaynaysay xerada Woyaanaha markii waagu beryey waxay u carareen dhinaca GeriGo’an. Waxay rabeen inay meel aan laga filaynin ka galbadaan. Markay meel Lebiga la yidhaahdo marayaan ayey haddan cabsadeen oo dhinaca Goomaar ka soo galeen Laamiga siga oo ciidan badan oo Wayaane ah wado. Waxaa xaqiiqa ah in isaga iyo kuwa la socday oo dhan ay guul darradii ka raacday iloobi doonin.
Wixii ka soo kordha gadaal ayaan idinkala soo socodsiin doonaa.